पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउने तीन जना पक्राउ ! « Online Tv Nepal
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउने तीन जना पक्राउ !
Published : 20 March, 2020 7:54 am
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भक्तपुरस्थित घरमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको बताएपनि उनीहरुको पहिचान भने खुलाएको छैन । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरुलाई अहिले साँझ पक्राउ गरेको हो ।